FBC - Haraargee Lixaatti qaamotiin nageenyaa ajjeechaa raawwatan adabaman
Haraargee Lixaatti qaamotiin nageenyaa ajjeechaa raawwatan adabaman
Finfinnee, Adoolessa 5,2010(FBC)-Manni Murtii Olaanaa Godina Haraargee Lixaa qaama nageenyaa yakka ajjeechaan himataman sadi hidhaa cimaa waggaa 20tin adabe.
Godina Haraargee lixaa aanaa Bookeetti bara dabre hiriira mormii ‘namoonni hidhaman nuuf haa hikkaman’ jechuun bahame irratti lubbuun namoota sadii darbee ture.
Yakka ajjeechaa kana raawwachuun kan himataman 1ffaa Ahmad Haajii Itti Gaafatamaa Waajjira Bulchiinsa fi nageenya aanichaa, 2ffaa Gargaaraa Saajin Abdurahmaan Ahmad Poolisii, 3ffaa Gargaaraa Saajin Abdii Aadam Poolisii fi 4ffaa Gargaaraa Saajin Mahammad Taajir Sulee Poolisii irratti himaatni banamee ture.
Himannaan irratti dhiyaate ragaa Abbaa Alangaatiin waan mirkanaa’eef, Manni Murtii Olaanaa Godina Haraargee Lixaa Dhaddacha guyyaa Adoolessa 5, 2010 ooleen himatamtoota 1ffaa,2ffaa fi 4ffaa hidhaa cimaa waggaa 20tiin kan adabee jira.
Himatamaa 3ffaa Gargaaran Saajin Abdii Aadam immoo himatni irratti dhiyaate ragaan waan hin mirkanoofneef akkasumas ragaa ittisaa himatamaan dhiheeffateen yakkicha akka hin raawwanne waan mirkanaa’ef bilisaan gad lakkifamuu odeeffannoon Waajjira Dhimmota Koominiikeeshinii Godina Haraargee Lixaa irraa arganne ni mul'isa.
Oduuwwan Biroo « Naannon Amaaraa dirree jeequmsaa akka hin taane waamichi dhiyaate	Marii jalqabame milkeessuuf dhukaasa dhaabera- ABO »